ဟုတ်ကဲ့ ချစ်ပါတယ် ..
ကလေးလေး က ငှက်ကလေး ဖြစ်ချင်သလား..
ဟင့်အင်း .. မဖြစ်ချင်ဘူး.
ငှက်ခတ်သမားတွေ ကြောက်တယ် ..
ပြီးတော့ ငှက်ကလေးတွေ က ရေခဲမုန့် မစားတတ်ကြဘူး
ကလေးလေး က ငါးကလေး ဖြစ်ချင်သလား..
အစာတွေရဲ့နောက်ပုန်းနေတတ်တဲ့ ငါးမျှားချိတ်တွေ ကြောက်တယ်
ပြီးတော့ သူတို့ က မွေ့ယာတွေနူးညံ့တဲ့ အကြောင်း မသိကြဘူး
ကျားပေါက် ကလေးတွေ ချစ်သလား
ကလေးလေး က ကျားပေါက်ကလေး ဖြစ်ချင်သလား
ရက်စက်တဲ့ မုဆိုးတွေရဲ့ ရန်ကို ကြောက်တယ်
ပြီးတော့ သူတို့ က မြို့ပြ ရဲ့စကိတ်ကွင်းတွေ အကြောင်း မသိကြဘူး
ကလေးလေး က ပင်းဂွင်းငှက်လေး ဖြစ်ချင်သလား
သူတို့ ကို လိုက်သတ်တဲ့ ပင်လယ်ဖျံ တွေ ကြောက်တယ်
ပြီးတော့ သူတို့ က အတောင်ပံ တွေ အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိကြဘူး
ပန်ဒါကလေးတွ ကို ချစ်သလား
ကလေးလေး က ပန်ဒါဝက်ဝံလေး ဖြစ်ချင်သလား
ဟင့်အင်း မဖြစ်ချင် ဘူး
လှောင်အိမ်တွေ ထဲ နေရမှာကိုကြောက်တယ်
ပြီးတော့ သူတို့ က ပီဇာတွေ ရတဲ့ နေရာလဲ မသိကြဘူး
'ဒီလိုဆို... ကလေးလေး က
မွေး ပွ ရုပ်ကလေးတွေ ကြိုက်သလား ..
ကလေးလေး က မွေးပွ ရုပ်ကလေး ဖြစ်ချင်သလား ..
ဟင့်အင်း မဖြစ်ချင်ဘူး ..
သူ တို့ မှာ .. မေမေ မှ မရှိပဲ ကို...
ကလေး က .. မေမေ့ ကလေး ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်
မေမေ့ ပါး မွှေး ရတာ ကြိုက်တယ်
မေမေ့ သနပ်ခါး နဲ့ ချစ်တယ်
မေမေ့ ရင်ခွင် နွေးနွေး ကြိုက်တယ်..
မေမေ ခွံ့ ပေးတဲ့ မန်းမန်း ကြိုက်တယ် .
မေမေ ဖျော်ပေးတဲံ.. ကိုကိုး က ကောင်းတယ်
မေမေ ရွေးပေးတဲ့ .. ကျီကျီင်္ ကလေး က လှတယ်..
မေမေ စီးပေး တဲ့ ဘတ်ဘတ် ကလေး ကြိုက်တယ်.
မေမေ လိမ်းပေးတဲ့ ခါးခါး ကမွှေးတယ်..
မေမေ ပန်ထားတဲ့ ပန်းပန်း က လှတယ် ..
မေမေ နဲ့ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်တယ်..
မေမေ့ လက်မောင်း ခေါင်းအုံး ရတာ ကြိုက်တယ်..
မေမေ့ ခါး ဖက်ထား ရတာ ကြိုက်တယ်..
ကလေးလေးက .. မေမေ့ ကလေး ဖြစ်ရတာပဲ ကြိုက်ပါတယ်...။
ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၂
Posted by မမသီရိ at 12/27/2013 02:28:00 PM
တစ်သီတစ်တန်းကြီး တက်ကြွ ပြီး အပြာရောင် တွင်းနက်တွေဆီ
ကြွေးကြော် ချီတက် သွားကြတော့ ..
သူ က ဘေး ဖဲ့ ခွာထွက် .. လင်းလက်တဲ့ သင်းကွဲ ကြယ် ...
ရွှေရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် ကျန်နေသေးကြောင်း
သူ ကောင်းကောင်းကြီး ရဲရင့် ပြ ခဲ့..
အခန့်သာ မသင့်ခဲ့ရင်... .. အဲ့ကြယ်စင်ကလေး မီးငြိမ်းမှာ..
အခန့်သာ မသင့်ခဲ့ရင် .. အဲ့ကြယ်စင်ကလေး သွေးစွန်းမှာ...
အခန့်သာမသင့်ခဲ့ရင် .. အဲ့ကြယ်စင်ကလေး
အခန့်သာ မသင့်ခဲ့ရင် ... အဲ့... ကြယ် စင် ကလေး....
အမှန်တရား ဟာ.. စကြာဝဠာ မှာ မဆိတ်သုဉ်းဘူး...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဟာ လူတိုင်း မကြိုက်သော်ငြား
အဲ့ဒီ သင်းကွဲကြယ်ကလေး မောင်းခတ်ခဲ့ ....
လူတကာလျှောက်ဖို့ ..စိုးရွံ့ သော.. ထိုလမ်းကလေး..
သူ နွေးနွေးထွေးထွေး နဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့တာ ..
စိမ်းကားသော မျက်ဝန်းများ သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ မေ့ထား...
သူ့လက်များ ကား အေးစက်မနေခဲ့ ...
သင်းကွဲ တဲ့ ကြယ်ကလေး ရေ..
မင်း သူငယ်ချင်း ဘိုင်ဖရီ .. ဟာ..
တရား .. ဆိုတဲ့ ဓမ္မ .. မင်းပြလို့ ရအောင်...
သူ့ဘုရားသခင်က သူ့ ကိုဖန်ဆင်းမွေးဖွား...
မင်း ကတော့ .. သံသရာ ဆိုတာယုံတယ် လို့ .. မှတ် လိုက်ပါရစေ..
မင်းရဲ့ မျှတ ခြင်း .. မင်း ရဲ့ အလင်း...
မင်းရဲ့ မကြောက်တရား.. မင်း ရဲ့ ချစ်ခြင်းများ အတွက်...
နှင်းဆီ အနီ တစ်ကိုင်း... တစ်နေ့ က မနက်ပိုင်း..
ကျမ ရဲ့ ဥယျာဉ် အရိုင်းကလေး မှာ ပျိုး...
အဲဒါ မင်း ကို ဂုဏ်ပြု တဲ့ ပန်းအိုးကလေး ပေါ့...
ဘိုင်ဖရီ ရဲ့ သူငယ်ချင်း.. သင်းကွဲ ပေမဲ့.. လင်းလက်တဲ့ ကြယ်ကလေး ရေ......။
မြန်မာပြည် တောင်ဖက်စွန်းမှ ကဗျာဆရာလေး မောင်ယုပိုင်အတွက် မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ။
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 12/18/2013 12:35:00 PM
နောက်ကျနေတဲ့ ကျမ ဧည့်သည်
ရုတ်တရက်ကြီး အငိုက်ဖမ်း ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့
ဘယ်သူတွေ က တခုတ်တရ ထင်ခဲ့မှာလဲ..
ကျမရှေ့ မှာ ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက်ကြီး..
ကျမ မယ်လေ.. ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ.
အပြုံးနဲ့ ကြိုရ ကောင်းနိုးနိုး..
အမုန်းနဲ့ ကြိုရကောင်း နိုးနိုး..
ကြာ လိုက်တာ လို့ .. ခြေဆောင့် စိတ်တိုပြလိုက်ရ ကောင်းနိုးနိ်ုး..
ကျမ လွမ်းခဲ့ရတာ ဘယ်လောက် ရှိပလဲ ..ဆိုးတယ်...
အဲဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာ .. ခရေဖူး တွေ ....
သူ့အဖေါ် ကြောင့် ကြွေ ကြွေ ကျ...
ဒေလီယာတွေ က ခေါင်းမော့ လည်ခါခါ ..
မဟာဆန်သူသဇင်တွေ ကျ အိနြေ္ဒ ကြိတ်ပြုံးကလေး နဲ့
ကျမ ထက်တောင် သူတို့ရင်ခုန်ကြသလား..
လည်စီးအရောင်လှလှ ကလေးတွေ ရေ..
ကျမလည်တိုင် ဟီးလေးခိုလှည့်အုံး ..
ပုန်းရာက ပြန်ထွက်ခဲ့ ကြကွဲ့ ..
အဖြူရောင်ဆွယ်တာကလေး .. တင်းတင်း ဆွဲ စေ့လိုက်ပြီ..
ကျမ ချစ်သော ဆောင်း ပေါ့.. ကျမ ဆီ ကို .. တိုးဝင်ထွေးပွေ့ ခေါင်းဝှေ့ ကျီစယ်နေတာ ကို....။
၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 12/16/2013 03:12:00 PM
လပြည့်၊ ခရမ်း၊ အစိမ်းနု၊ တယ်လီဖုန်း၊ အဆိပ် .. အမုန်း
တိတိကျကျ ပ နေတဲ့.. လ ဟာ.. ည ကို စိန်ခေါ် နေလိုက်ပုံ..
မတန်တဆ ပေးဆပ်ခဲ့ရသော.. အဆိပ်သင့် ဆည်းဆာများ အလွန်မှာ..
အရာရာ ကို မေ့ထားနိုင်စွမ်း အတွက်.. အဲဒီပန်းချီကား .. ခရမ်း များ နဲ့သာ ဆွဲပါရစေ..
ခြေသံတွေ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဝေးကွာ သွား....
လက်ဆွဲ တံခါးအနားမှာပဲ ကျမ တစ်ချိန်လုံး ရပ်နေခဲ့တာပါ..
အိပ်မပျော်သော ညတွေတော့ မရှိ.. အိပ်မက်ထဲ ထိ လွှမ်းမိုးထား တာ.. အစိမ်းနုရောင် သူ့မင်္ဂလာအိပ်ယာ ..
ခါးသီးစွာ ငြင်းလိုက်ချင်ပါ ရဲ့.. အဲဒီတိုက်ပုံ.. အဲဒီပုဆိုး.. အဲဒီအပြုံး.. အဲဒီ ဆံထုံး...
ထွက်သွား... ထွက်သွား.. ထွက်သွား... ပေးပါ..
၀ဋ်ကြွေး ကို မယုံ ခဲ့မိတာ မှားပြီလား.. မုသား မှာ သာယာမိသူဟာ..
လေအေးပေးစက် ကို ယောင်ရမ်း ပိတ်မိ
အိုင်တွေ့တဲ့ အခါ ခြေဆေးပါ.. ကေတီဗွီမှာ အပန်းဖြေပါ..
နောက်ဆုံး ဘတ်စကား အမှီပြန်ပါ..
အွန်လိုင်းက အချစ်ဆုံးလေးတွေ ပျော်ပါစေ..
လကုန် ရက် သူ့အပြုံးမှာ ကျေနပ်ပါ.. ညဖက် သူ့ နဘေးမှာ ကြည်နူးပါ..
အမှောင်ထဲ သူ့နှုတ်ခမ်းမှာ နစ်မွန်းပါ..
အပြန်မမှီ ရက်များ.. ဖုန်းနားမှာ အမြဲ နေပါ..
၀ဋ်နာ ကံနာ.. မကင်းကွာ မီကလေး.. မက်ဆေ့တွေ လဲ မမျှော်လိုတော့
စေ့ထားသော တံခါးနား. ခရမ်းရောင်ပန်ချီကားထဲမှာ .. နာကျင်စွာ... ။
၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 11/26/2013 05:22:00 PM
ဆွံ့အ နေတဲ့ ဆောင်း
ဆောင်းဦးကြို ..တောပန်းဝါ၀ါများနဲ့ လှပခဲ့သော တောအုပ်..
လမ်းဘေး က ထီးတည်း သစ်ပင် ကြီးကရော .. အိနြေ္ဒကြီးတုန်း ထင်ပါရဲ့..
မီး ပုံ .. နွေးနွေး ကလေး လွမ်းတယ်..
မိုးရနံ့ကင်းတော့ စမ်းရေ တွေ က ကြည်လဲ့လို့ပေါ့ ..
ချိုးကလေး မောင်နှံ ကယုကယင် ချစ်တုံ့တင် ကူချွဲ
အဖြစ်သဲ လို့တော့ မဟုတ်ပေါင်ကွယ်..
ကျမ ရဲ့ အတိတ်က ပြတင်းနဘေး လာ.လာငေးတတ်တဲ့ ငှက်ပြာ ကလေးရေ..
ကျမ ရောက်နေတဲ့ သတ္တုရောင် ပင်လယ်မှာ..
မြောက်လေ ကလဲ စိမ်းကား ရက်စက် .. ဝေးဝေး မှာ
မိုးမှုန်တွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ သစ်ရွက်တွေ အရောင်မဲ့
ကျမ ချစ်ခဲ့ သော ဆောင်းတစ်ခု ဟာ.. ဆွံအ နေ.....။
၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 11/18/2013 03:46:00 PM
PEN International, PEN Myanmar နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေလောက
Poets, Essayists, Novelists ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အစ ကိုယူထားခဲ့တဲ့ PEN အဖွဲ့အစည်းကို ကလပ်တစ်ခုအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ ပြဇာတ်ရေးသူ ကဗျာဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Catherine Amy Dawson Scott က (၁၉၃၂) စာပေနိုဗယ်ဆုရှင် စာရေးဆရာ နှင့် ပြဇာတ်ရေးသူ John Galsworthy နဲ့အတူ ၁၉၂၁ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ PEN ဟာ Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists’ ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စာရေးဆရာတွေ အချင်းချင်းကြား နားလည်မှု နဲ့ အသိပညာပူးပေါင်းဖလှယ်ရေး တိုးမြှင့်စေရေး၊
ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စာပေဟာအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှအရေးပါကြောင်း ပိုမိုအာရုံ စိုက်လာစေဖို့အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရေးဆရာအသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုတည်ဆောက်ရေး
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ ခြိမ်းခြောက်ခံလာရတဲ့ စာပေလောက ရှင်သန်ရပ်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်သွားရန်
ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေ နဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ PEN ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတိုင်မီထိ International PEN ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ကျော်ကြားခဲ့ပြီး တော့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာတော့ PEN International လို့ တရားဝင် အမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ PEN International အဖွဲ့ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ကြီးတရားဝင် အကြံပေး နဲ့ The Economic and Social Council အဖွဲ့ရဲ့အထူးအကြံပေး အနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာရှိတဲ့ စာရေးဆရာများအတွက် “လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့် (Freedom of Expression)၊ ငြိမ်းချမ်းရေး (Peace)နှင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု (Friendship)” တို့ကို အခြေခံကာ စာရေးဆရာများရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားပြု အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
John Galsworthy ဟာ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော PEN ဥက္ကဌဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ လက်ရှိကာလထိ ဥက္ကဌ စုစုပေါင်း ၂၄ ယောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် Joseph Conrad, Elizabeth Craig, နဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ အလွန်ရင်းနှီးသော စာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ George Bernard Shaw, နဲ့ H.G. Wells တို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ H.G. Wells ဟာ အဖွဲ့ကြီး ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဥက္ကဌ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန်မြို့မှာ ကလပ်တစ်ခုအနေနဲ့ စတင်ခဲ့ PEN အဖွဲ့ကြီးဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာ PEN စင်တာပေါင်း ၁၄၅ ခု ထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
PEN International အဖွဲ့ကြီး ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာတွေ ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အမှန်တရား ကို အစဉ်တစ်စိုက် စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ ကာကွယ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ PEN/ Babara Gold Smith (Freedom to Write Award) ဆုကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ အကျဉ်းချခံ စာရေးဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း) အား ပထမဆုံး အနေနဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထောင်ထဲရောက် ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ် ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ လူရွှင်တော် ဇာဂနာနဲ့ ကဗျာဆရာ စောဝေတို့ နှစ်ဦး Oxfam Novib/PEN Award for Freedom of Expression ဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် Dennis Abrams က Publishing Perspectives ထဲက သူရဲ့ဆောင်းပါး After 15 Years, PEN International Finally Opens in Myanmar ထဲမှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ထောင်က လွတ်လာခဲ့တဲ့ ဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း) ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုကြောင့် ၁၅ နှစ်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက် က ၁၃ ရက်နေ့ထိ အိုက်စလန် မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၇၉ ကြိမ်မြောက် PEN International ရဲ့ ကွန်ဂရက် က မြန်မာပြည်ထဲမှာ PEN Myanmar ကို တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာပဲ အကျဉ်းသားဟောင်း ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ် က “PEN Myanmar ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်၊ ခါးသီးတဲ့အတ်ိတ်တုန်းက ကျွန်တော်တို့က သူများတွေရဲ့ အကူအညီကိုပဲ ရယူခဲ့ရတယ်၊ အနာဂတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဒုက္ခရောက်သူတွေ ကို ကူညီနိုင်တော့မှာပါ” လို့ ဆောင်းပါး ရှင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ ဖေမြင့်ကလဲ အဲဒီဆောင်းပါးထဲမှာပဲ “ မြန်မာဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုအောက်မှာ ကာလရှည်စွာ နေခဲ့ရတယ်၊ နိုင်ငံတစ်ကာ က စာရေးဆရာတွေ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့စာပေ အသိုင်း အ၀ိုင်း အခြေအနေကို ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ကမ္ဘာ့ကြိးအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်`“ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းပညာရေးနှင့် ရသစာပေကို ပေါင်းကူးဆက်စပ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်။
စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (၃)ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ PEN Myanmar ရဲ့ Facebook Page https://www.facebook.com/penmyanmar မှာ PEN Myanmar အကြောင်း အသေးစိတ် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း) ရဲ့ ပဲ့တင်သံဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ PEN Myanmar အကြောင်း ဆောင်းပါ ကိုတော့ ဒီမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သလို PEN International မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ နေဘုန်းလတ်နဲ့ အင်တာဗျူး Interview with Myanmar PEN’s Nay Phone Latt. မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
PEN International Website: www.pen-international.org
Facebook : https://www.facebook.com/penmyanmar
Dennis Abrams, Publishing Perspectives: After 15 Years, PEN International Finally Opens in Myanmar
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် အမျိုးသားနေ့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မဲ့ PEN Myanmar ဖွဲ့စည်းရေး ညီလာခံ. အား ကြိုဆိုသောအားဖြင့်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 11/13/2013 04:22:00 PM
သတိမရ ဖို့ သတိတရ တွေးနေရတာနဲ့တင်
ရှုပ်ရှက် ခတ်အောင် လှိုက်ကနဲ လွမ်း ရတာတွေ..
ထီ မထိုး ထားပဲ .. ထီ ပေါက်စဉ်စာမျက်နှာ ရှာဖွေ စောင့်ကြည့်မိတာမျိုး
ရူးပါတယ် လို့ ၀န်ခံ ထားပါလျှက်နဲ့ အလဲ ထပ်ထိုးချင်နေတာလား ဆည်းဆာ ရယ်..
လူမနေတဲ့ ဟိုဖက်ခြမ်း က တိုက်ခန်းတွေ မှာ.. ခိုကလေး နှစ်ကောင်..
ဟင့် အင်း.. ကျမ ကို လှမ်း မကြည့်ပါနဲ့..
ခန်းဆီး ၀ါဝါ တွေ ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်တော့ .. နှစ်သိမ့် ချင်ပါ ရက် ကွယ်..
မနက်ဖြန် နှင်းဆီ တွေ ၀ယ် ယူခဲ့ပါ့မယ်.. ...။
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 11/08/2013 11:36:00 AM
Dedicated to Oatara;6November
အသစ် အသစ် ဖြစ်လာ..
အသစ် အသစ် တိုးလာ..
မရိုး နိုင်သော အပြုံးများ..
နှလုံးသား မှာ.. စွဲ ထင်...
စိတ်ကောက် သော်လည်း ချစ်မက်..
နေ့များ. ညများ.. ကျော်လွန်သွား..
ခွန်အား တို့ သာ တိုးပွား...
Dedicated to Oatara.
Posted by မမသီရိ at 11/06/2013 06:00:00 AM
Labels: ကဗျာ, မွေးနေ့လက်ဆောင်
New November, New Days ... Reborn Life
After I had tried to leave
the poison days and nights ...
the feeling-less lights and ways ...
Hope, I reborn again today.
Posted by မမသီရိ at 11/02/2013 12:02:00 PM
For the grapes’ sake along the wall....
Posted by မမသီရိ at 10/28/2013 05:46:00 PM
Labels: ရင်ကိုမှန်သော ကဗျာများ
ချနင်းခံလိုက်ရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ..
ယုံကြည်မှုတွေ .. ကြေကွဲ သွားခဲ့ပြီ..
ပြန်ဆက်လို့မကောင်းနိုင်တော့တဲ့ မှန်ကျိုး စများသာ
..ဟိုတစ်.. ဒီတစ်စ ..ပြန့်ကျဲ.... ။
၃၁ သြဂုတ် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 8/31/2013 01:42:00 PM
ဖေဖေ ပြန်မလာ တဲ့ .. ည.များ နဲ့.. နံနက်ခင်းများ ထဲ က ငါတို့ကျောင်း
နေခြည်မှာ ရွှေရည်မလောင်းနိုင်တော့တဲ့ သူတို့ ကျောင်းကလေးတွေ..
ကျနော့ ရဲ့ကျောင်းက .. အမိုးတွေ မရှိတော့ဘူး
အကာ တွေ လဲ မရှိတော့ဘူး..
အခင်း ကလဲ .. မရှိတော့ဘူး....
စာသင်ခုံတွေလဲ မရှိတော့ဘူး ...
ဆရာမ လဲ မရှိဘူး..
ဆရာ လဲ မလာတော့ ဘူး...
ကျနော်တို့ သေနတ်ကျည်ဖူး တွေ နဲ့ သာ ကစားတယ်..
ကျနော့် ကို သေနတ်တစ်လက်ဝယ်ပေးပါ မေမေ..
ဖေဖေ ပြန်လာ အောင် သား လိုက် သွား မလို့..
ဖေဖေ က ဘာကို တိုက်တာလဲ မေမေ
ဘယ်သူ က ဖေဖေ့ ကို တိုက်စေ သလဲ. ..
သား ထမင်း ၀၀ မစား ရတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ ပါလိမ့် ..
သား လွယ် အိတ် က .. မီးလောင်သွား တဲ့ သားတို့ အိမ်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တယ်..
၀ ..လုံး လေးတွေ .. သား တကယ် လွမ်း ပါတယ် မေမေ
ဖေဖေ့ ကိုလွမ်း တယ်.. ၀ ..လုံးလေးတွေ လဲ လွမ်းတယ်..
အကယ်လို့ များ ဖေဖေ ပြန်လာရင်..
၀ လုံးတောင် မရေးတတ်သေးတဲ့ သား ကို.. ဖေဖေ က ဆူမှာလား မေမေ ..
မေမေ ငို တာ သား လို မျိုး ဗိုက်ဆာ လို့ လား...
ဒါမှ မဟုတ်.. ဖေဖေ့ ကို လွမ်း လို့ လား...
ဒါ မှ မဟုတ်.. မေမေ ရေ ခပ်သွား တုန်း..
မေမေ့ လက် လိုက် ဆွဲ တဲ့ ဟို အရက်မူး ဦးလးကြီး ကြောင့်လား..
မိုး တွေ က ရော.. ဘာလို့ ဒီလောက် သဲတာ လဲ မေမေ
သား တို့ တဲ လေး.. အရည်ပျော် ကျ ပေါ့..
သားတို့ အတွက် ထင်း လဲ လိုတယ်.. သား ချမ်း နေပြီ မေမေ
ဖေဖေ့ ကို ဘယ်သူ က ပြန်ခေါ် ပေးမှာ လဲ..
သား တို့ ကျောင်း ဘယ် သူ ဆောက်ပေးမလဲ...
အရက်မူး တဲ့ ဦးလေးကြီး .. ည ည မ လာရအောင်.. ဘယ်သူ တားပေးမလဲ..
သား ချမ်းတယ် မေမေ.. သား ကို ဖက်ထား ပါ....။
၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 7/30/2013 11:21:00 AM
ခရီးဝေး ဘတ်စ်ကား ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ ကျောပိုးအိတ် အပြာ ရောင်ဟာ
အခန်းကျဉ်း အိပ်ယာ ဘေး မှာ လဲ လျောင်း ငြိမ်သက်..
အသက်ရှုသံ ပြင်းပြင်း တွေ အောက်မှာ .. တယ်လီဖုန်း ဟန်းဆက် က ပိတ် ကျသွား တယ်...
ဒီနေ့ ပြန်လာမယ် ဆို တာ သိပြီးသား..
ကြို နေသူ ရဲ့ .. ရာနှုန်းပြည့် သေချာမှု ..
ဒီရင်ခွင် ကို သူမ သာ ပိုင်တယ်.. ဘယ်သူ ဘာပြော မလဲ..
အိမ်ရှေ့ က ဈေး ဆိုင်လေး စောစော သိမ်း တယ်.. ၀ယ်သူ တွေ မလာ ကြနဲ့ ..
သူ့ အိတ်ကပ်ထဲ က .. သူမ အတွက် သိမ်းထား တဲ့ စာမူ ခ ..
တယု တယ သူမ .. သိမ်း ယူ ...
နဲနဲ များများ .. ပိုင်ဆိုင်ခြင်း အစစ်အမှန်ဟာ ဒါ ပဲ ဖြစ်တယ်..
ည ဟာ .. ဘာ ကိုမှ မမှု သလိုမျိုး
အမှောင် ကို တစ်ပါတည်း သယ်ဆောင် ရင်း
လိမ့် လာလိုက်တာ ဆို..
သူ့ တစ်ကိုယ် လုံးအဆူး တွေ တစ်ရှရှ တစ်ထောင်ထောင်
တောရိပ်ညိုညိုတွေ ဟစ်အော် တားတာတောင် ဂရု မမူ ခဲ့ ..
တစ်စိုက် စိုက် တစ်မတ်မတ် ပါပဲ
ရင် ကို အစိမ်းလိုက် ဖြတ်ဖေါက် ထွက် သွား ပုံ...
သူ့ ဆူးတွေ သီမိသွား တဲ့ နှလုံးသား တစ်စုံ ဟာ
မြစ် ကမ်း နံဘေး ကွေ့ကွေ့မှာ သွေး ချင်းချင်း နီ ရဲ လို့ ..
မိုက်တိ မိုက်ကန်း ည.. လေ အဟုန်မှာ..
အတွင်းခံ ဘယာကြိုး လျှော့ခံရတဲ့ မိန်းမ တစ်ယာက် ရဲ့
ကြည်နူး ငြီးငြူ သံ သဲ့သဲ့ လှိုက်လှိုက်မောမော ဟာ ဝေ့ဝေ့ ဝဲဝဲ လွင့်မျောပါ လာ...
ငရဲပြည် မှာ ရှိတယ်
ကြာသပတေး.. ညတွေ မှာ ရှိတယ် .....။
၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 7/24/2013 09:18:00 PM
မောင် ရေ.. လွမ်းတယ်
မြတ်နိုးခြင်း ကို တိုင်းတာဖို့ ပြဒါးတိုင်ကလေး တစ်ချောင်း
ကြင်နာခြင်း တွေ သိမ်း ထုပ်ဖို့ .. ပုဝါ ခပ် ပါး ပါး တစ်ခု
တမ်းမက် မှု များ .. လွှမ်းခြုံထားသော ..
မျက်ဝန်းညို အကြည့်များ.. အမိအရ ပစ်ဖို့ မျှား တစ်စင်း ..
ကျမ နေကြာပန်းခင်း မှာ ထွန်း လင်း နိုင် ဖို့
နေမင်းတစ်စင်း ဖြစ် စေ.. နှင့် ကျမ လိုအပ် သော အရာများ…
သူ့ပါး ကလေး ကိုင် ကြည့် တဲ့ အခါ နူးညံ့ မှုတွေ နဲ့
တွယ်တာခြင်းတွေ အုံလိုက် ကျင်းလိုက် ပွင့်အာ လာ .
ကျမ ကျောပြင် ပေါ်က သူ့ လက်ကလေး ရဲ့နွေးထွေး သိမ်မွေ့ခြင်း
ဘုရားသခင် အလိုတော်ကျ.. ကျမ ရရှိခဲ့ သော.. သူ့ချစ်ခြင်းတွေ…
မငြင်းပယ် နိုင်လောက် အောင် .. နက်ရှိုင်းခဲ့ ..
နာရီ နဲ့ စက္ကန့်များ.. ကာလ များ စွာ.. ကျမတို့ အတူတူ ဝေးကွာခဲ့ ဖူးတယ်..
နေ့များ ည များ.. နာရီများ.. အချိန်များစွာ .. ကျမတို့ စိတ်ချင်း နီးကပ်ခဲ့ဖူးတယ်..
ကျမ တို့ တူတူ စိတ်ကောက်တယ်..
ကျမတို့ တူတူ ဝန်တို တယ်.. အပြာ ရောင် တူတူ နှစ်သက်တယ်..
ချစ်ခင် စွာ တူတူ ငြင်းခုံတယ်.. နှစ်သက်စွာ .. တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် အော်ငေါက်တယ်..
ခြေ တစ်ချက် လှမ်း တိုင်း အလွမ်း ပန်းတွေ ပွင့် နေ..
ဖုန်းခေါ်သံ ကလေး များ.. မကြားလေ တဲ့ အခိုက်..
ကျမ ရဲ့ သဘောင်္ ကလေး.. ဘယ်မှာများ ဆိုက် နေသလဲ ကွယ်..
လိပ်ပြာဖမ်း ပိုက်ကွန်ကလေးက ငယ်နေသလားး..
ကျမ ချစ်ခြင်း အင်အား ကို ကျမ ယုံတယ်..
လေပြေ က တိတ်ဆိတ် ငြိမ် ၀ပ်လို့ … ဆိတ်ဖလူး ရနံ့ တွေ တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ ပြေးလာလို့
မိုးညို့ညို့ တွေ က တောင် ဖက် ဆီ .. မာန်ချီ လို့ ..
ဒီလောက် ချစ်နေမိမှတော့.. ဒီလောက်လွမ်းရတာ ဘယ် ဆန်းမလဲ ကွယ်..
မောင်.. ရေ့.. လွမ်းတယ်.. ။
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 7/17/2013 12:31:00 PM
ပြန်မနိူးတော့မဲ့ မင်းသမီး .. အတွက်..
တောင် တစ်လုံး တစ်လေ ပျောက် သွား ဘာများ ဖြစ်မှာလဲလို့
ရှင် တို့ ပြောကောင်း ပြောကြပေမပေါ့ ..
အုတ် တစ်ချပ်စာ လေး .. ဘာ အရေးလဲ လို့
မတွေး ခဲ့ သူတွေ ကြောင့် သာ..
ဒီနေ့ ဒီ ကမ္ဘာမှာ..
ပုဂံ ဆိုတာလဲ ရှိရဲ့.. ဗောရောဗောဓိလဲ ရှိရဲ့
မဟာ တံတိုင်း ကြီး လဲ ရှိရဲ့..
မြောက်ဦး လဲ ရှိရဲ့ .. အီဂျစ် စဖင့် တွေလဲ ရှိရဲ့ ..
သစ်ပင် တွေ သစ်တော ဒီလောက်ပေါ နေမှတော့
တစ်ပင် တစ်လေ လောက်လေး ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး ပေါ့
ဟို လူတွေး ဒီလူတွေး အတူတူ ဒီအတွေး နဲ့
၀ိုင်း အားပေး လိုက် ကြတာ .. ရာစုနှစ် တစ်ဝက်မှာ
ငါတို့ သစ်တောတွေ ..ဂနာလရာဇ်ပြည် ဆီ ဘ၀ ပြောင်း
အက်ကြောင်းတွေ ဘယ်လို ပြန်ဖာထေးကြမတုန်း..
ကုန်းရုန်း သီး ခံ သူ က သီးခံ..
ကုန်းရုန်း.. အကောင်းစံ သူ က အကောင်းစံ..
အပျိုစင် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် နဲ့..
နာကျင်စွာ လဲ လျောင်း.. အဓမ္မ အကျင့်ခံ
လက်ပံတောင်းတောင် မင်းသမီး ထံ ..
နှုတ်ဆက်ရန် တစ်ခေါက်.. ရောက်ခဲ့ စဉ်အတွေး ..
ချရေး မိတာလေး တွေ...
၀၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 7/13/2013 05:29:00 PM
သူကလည်း သူ့တာထဲက မထွက် နိုင်
ကိုယ် ကလဲ ကိုယ့် တာထဲ မထွက် နိုင်..
မျက်နှာချင်း ဆိုင် တွေ့ ရက် နဲ့ လက်ကလေး တောင် မကိုင်နိုင် တဲ့ အဖြစ်..
ဇာတ်တော်ထဲက မင်းဒဿ သာ ခေါ်လို့ ရမယ်ဆို..
ဟန်ဆောင်တာ မူပို တာတွေ အသာထား..
ဇွတ်ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့ ..
အတင်း အကျပ် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် .. လာခိုး လှည့်ပါ့ .. ကျမ ကို.. ..။
၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 7/04/2013 02:28:00 PM
ကျမ ချထား ခဲ့တဲ့ ခြေရာတွေ ကောက်ပြီး မှ ကျမ နောက်လိုက်ခဲ့ ပါ အယ်လစ်ဇာ..
အဖုံးတွေ ဖုံးထားတဲ့.. ရာဝင်အိုးတွ မှာ.. လောက်လန်း တွေ နဲ့ ပွ သယောင်း ထ နေတဲ့ အကြောင်း
မီဒီ ယာ ကို ချခင်း.. ဘာသတင်းတွေ ပေးချင်နေရတာတုန်း အယ်လစ်ဇာ..
ကျမ က နေ့ဆို.. လင်း နေမှ.. ည ဆို မှောင်နေမှ ကြိုက်တာ.
ဟိုမရောက် ဒီ မရောက် နေ့ များ.. ဟို မရောက် ဒီမရောက်ည များ..
ကျမ နား သီ တောင် မသိ မိ ပါစေ နဲ့ လား .. လောလော ဆယ်
အယ်လစ် ဇာ ရေ.. လ ကို လဲ ချစ်ပါ ရဲ့ တိမ် ကို လဲ ချစ်ပါရဲ့ ..
ဒါပေမဲ့.. ကျမ ခုတစ်လော.. အဖြူ အမဲ ပဲ သဲ ကွဲ ချင်နေမိတာ ကို..
ကျမလား... ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ထွေ ခင်း ကစား ချင်လို့..
ဟို တစ်ယောက် ကို အပိုင် လိုချင် မိတာ ခဏ ထား...
ကိုင်း ဖျား ကိုင်း နားတွေ မှာ တောင်.. လုံ ခြုံမှုနဲ့ အိပ်စက်ခြင်း ရဲ့ တရား..
ကျမ တို့ ရပ် လိုက်ကြရ အောင်ပါဆို... အဲဒီ အမုန်း စကား များ..
ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်ပေးရ မလဲ ဟုတ်လား..
မေးခွန်းလေး များ ကြည့်မေးစမ်းပါ့ ... အယ်လစ်ဇာရယ်.. ..
လမ်းပေါ် မှာ.. ကလေး လဲ သိ.. ခွေး လဲ သိ... အားလုံး သိ...
ရှင်းရှင်း ကြီး. သိ.. မင်း.. မသိတာ မလွန် လွန်း ဘူး လား ကွယ်...
စစ်တန်းလျားတွေ ဆီ.. ကျမ တို့ ခဏ အလည်သွား ကြမလား..
အိုးအိမ် စည်းစိမ် တွေ ပြာ ပုံ ထဲ ပစ်ခဲ့ရ .. ဒုက္ခ သည် စခန်း နား ခဏ သွား ကြမလား
စစ်ဘေး သင့် မိဘ မဲ့ ကလေး တွေ နဲ့ မင်း မျက် လုံးချင်း ဆိုင် စကားပြောရဲသလား..
သွေးအိုင် ထဲ မိသား စု ၀င် ရဲ့ အိပ်မက် ဆိုးနဲ့ အသက် ရှင် မိခင် တွေ လက် မင်း ကိုင်ရဲမလား..
မီး လောင် ပြင် ထဲ က ကြေကွဲ မျက် ရည် တွေ အတွက် .. မင်း စာ ရင်း ကောက်ဝံ့ သလား...
ကောင်း ကင် ကြီး ကတော့ ရှိပါ ရဲ့ အယ်လစ် ဇာ ..
ကျမ တို့ အားလုံး ဘယ်တော့ တူတူ နွေးထွေး ကြ ရမလဲ...
နောင် ဘ၀ တွေ ရှိတယ် လို့ ယုံ တဲ့ သူတွေ က .. ဒီ ဘ၀ မှာ.. မတူ တဲ့ သူ ကို ဒုက္ခပေး..
တစ် ဘ၀ ပဲ ရှိတယ် လို့ ယုံ ကြည် သူတွေ က.. ဒီ ဘ၀ မှာ ပဲ အသက် စတေး ဖို့ ၀န်မလေး..
ကျမ တို့ ရှည် ရှာ်ဝေးဝေး မစဉ်စား ကြေး လေ.. အယ်လစ်ဇာ...
တကယ် တမ်း တော့.. ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ.. ရှိတာ လူ သန်း ပေါင်း ၇၀၀၀ သာ..
သူ ငယ်ချင်း တစ်ယောက် ကတော့ အယ်လီယန်တွေ လာစေချင် သတဲ့..
ကျမတို့ .. ဘာကို ချစ်လို့ .. ဘာ့ အတွက်... သံလွင် ခက်တွေ ချနင်း..
ချိုး ဖြူလေး တွေ .. သွေး ချင်းချင်း နီ စေ ရ တာပါလ်ိမ့်....
ကျမ ရဲ့ Little Prince လေး.. ကျမ သိပ်လွမ်း တာပဲ...
ကျမ ဦးခေါင်း မှာ.. မသိ နားမလည် နိုင်ခြင်း နဲ့ သက်ပြင်းတွေသာ ပြည့် နှက်..
ကျမ ကို တကယ် ချစ်တယ်ဆို..
ကျမ ချထား ခဲ့ တဲ့တဲ့ ခြေရာတွေ ကောက်ပြီး မှ ကျမ နောက်လိုက်ခဲ့ ပါ အယ်လစ်ဇာ...
ငြိမ်းချမ်းမှု တွေ စုဝေး ရာ တောင် ကုန်းတွေ ဆီ ကို သာ ကျမတို့ သွား ကြရအောင်ပါ...။
Posted by မမသီရိ at 7/01/2013 07:20:00 PM
တို့အားလုံး ရဲ့ နှင်းဆီနီ (၂၀၁၃)
သူဟာ ရဲရင့်တဲ့ နှင်းဆီ နီနီ
သူ အောင်ခဲ့ ပြီးပြီ....
သူ ရည်ရွယ် ကူးခဲ့ပြီးပြီ..
အများ အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးပြီ...
ကမ္ဘာ ရဲ့ ဦးညွတ်ခြင်း အခါခါ ခံခဲ့ရပြီး ပြီ...
ကိုက်ချီကာ သူ သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မို့..
သူ့လမ်းစဉ် သူ ဆက်လျှောက်
ချို ချို ခါးခါး ..သူမကြောက်..
ပန်းကြာစင် လို လန်းစေကြောင်း..
ပြည်သူ အပေါင်း ဝန်းရံခ ...
သူဟာ.. နေ.. သူ ဟာ.. လ..
တို့အားလုံးအတွက် တော့ .. နှင်းဆီနီနီ ချိုမြမြ.။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အကျဉ်းကျနေခဲ့စဉ်တုန်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့.မှာ ရေးဖွဲ့ခဲ့သောကဗျာ အား.. ချစ်ခင်လေးမြတ်ခြင်းအားဖြင့် ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၃ ခုတွင် ပြန်လည်
မွမ်းမံကာ မွေး နေ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရေးဖွဲ့ခဲ့သော မူရင်း ကဗျာ နှင့် မှတ်ချက်များအား တို့အားလုံးရဲ့ နှင်းဆီနီ
Posted by မမသီရိ at 6/19/2013 03:00:00 PM
Labels: ကဗျာ, ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း, မွေးနေ့လက်ဆောင်
ဒီရက် ဖြစ်တဲ့ အဲဒီနေ့ က ထူးထူးခြားခြား. ကျမ ရဲ့ ၀က်ဝံပေါက်စ ကလေး က .. မထိမ်း နိုင် မသိမ်း နိုင် တခစ်ခစ် ရယ်မောလို့ ..လူသူ ကင်းမဲ့ နေတဲ့.. ကျီးလန့် စာစား.. ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
တောထဲ မှာ ပဲနေတတ်တဲ့ ငှက်မဲ မြီး ရှည် တစ်ကောင် က.. နေ့လည် ကတည်း က.... ရှေ့ တံခါး နားမှာ စူးစူး ရှရှ.. တကျီကျီ.. အော်နေခဲ့ တာ ညဦး ရောက်တဲ့ ထိ..
မမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကံ ကြမ္မာ ဟာ.. အမှောင် ရိပ် မှာ တိတ်တဆိတ် ပုန်း လျှိုးလို့နေခဲ့တယ်.. ..
ငြိမ်းချမ်း မှု မြတ်နိုးစိတ် .. ဘက်မလိုက်မှု အား ..ဆုပ်ကိုင် ခြင်း နဲ့... တရားမျှတ လို ခြင်းဟာ .. .. ချောက်ကမ်းပါး အစွန်း ကို ဖိတ်ခေါ် တတ်တဲ့ အကြောင်း.. အမှောင် မှာ နာရီပေါင်း ၁၉၀၀...
ရန်လို ခြင်း.. ရိုင်း စိုင်း ခြင်းနဲ့... တရား မမျှ တခြင်းတို့ က.. .. နေ့ များ .. ည များ. ကို.. အမှောင် တွေ နဲ့ သာ နှစ်မြှုပ်လို့ ...
အပြစ်တင်လိုခြင်း မဟုတ်သော်ငြား... မကင်းဝေးခဲ့သော ကြောက်ရွံ့ခြင်း များ ... အမှန် တရား ကို.. ရင် မဆိုင် ရဲခဲ့ သော အခြေအနေအချိန် အခါ... မည်သူ မည်ဝါ.. တစ်ချို့ ကြောင့်... ဘ၀ တစ်ခု ဟာ.. မှင် နီ မှင်နက် များ နဲ့ စုတ်ချက်ထိုး ခံ ...ရုန်းကန် ရမည့် .. လော က ဓံ နှစ် ပတ်လည် ခဲ့ ပြီ......။
၁၄ ဇွန် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 6/14/2013 10:19:00 AM
I won't fall down again on 3rd mistake ...
ကျမ မောင်ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စကား..
ခဏ ငှား သုံးပါရစေ..
ခွင့် ပြုပါ.. မောင်လေး ရေ..
ပေါ်လူးရှင်း အမြင့်လွန်လာတဲ့ ညှီစို့စို့ မြို့ပြ ညနေခင်းများ....
အနားယူ အိပ် စက်ခဲ့ပုံမရတဲ့ .. အနာတရ နံနက်ခင်းများ...
အမွှေးရနံ့ .. ချွေး ရနံ့ .. စပယ်ရနံ့ .ချဉ်စူးစူးနံ့ ရနံ့များစွာ နေ့လည်ခင်းများ...
အေးခြင်း အတုအယောင် နဲ့ အခန်းကျဉ်း ကလေး ကတော့ ..
အနီ ရောင် နှင်းဆီ ပွင့်တွေနဲ့ ခေါင်းအုံး ကလေး တစ်လုံးကို အဖော်ပြု..
ခန်းဆီး ၀ါဝါ ထူထူ တွေ ရဲ့ နောက်ကွယ် မှာ..
လွမ်း ဆွတ်မှု တွေ နဲ့ စွတ်စို.. မှုန်မှိုင်း...
ဖုန်းခေါ် သံ တိတ်ဆိတ် တဲ့ ည ဟာ ..
ဒဏ်ရာ ရ ကျား တစ်ကောင် ရဲ့ ငြီးငြူ သံ နဲ့ ကြေ ကွဲ တိတ်ဆိတ်..
ညဉ့် က နက်လွန်း တယ်.. စက္ကန့်တွေ ရှည်လျားတယ်
အတိတ် က နီး လွန်းတယ်... အနာဂတ်က မှုန်လွန်း တယ်..
ကံကြမ္မာက ခါးသီး တယ်..
သူမ ရဲ့ နောင်တ တွေ ဟာ..
ရေတံခွန်တွေ ကို ရပ်တန့် ဖို့ မစွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့...
ဥာဏ်စဉ် ကို .. သတိနဲ့ ယှဉ်ကပ်ထား..
ဒီ အမှတ် ..မှတ်နေရ တာနဲ့ ကို.. သတိမရ ဖို့ ဆိုတာ မတတ်သာ ခဲ့...
နာ စရာ တွေ ရှာကြံ တွေးထား.. ဟိုနား.. ဒီနား မှာ..
ငါ .. မုန်း တီး တဲ့ .. ဆေး လိပ် ငွေ့ ..
ငါ မနှစ်မြို့ တဲ့.. ရီ ဝေ သော.. မျက် ၀န်းများ နဲ့.. ချဉ် တူး တူးး ရနံ့ တွေ...
ကန့်လန့်ကာ တစ်ချပ် နောက်ကွယ် က
ကျမ မသိနိုင်တဲ့ သူ့ day schedule များ... သူ့ night schedule များ...
ဒီလောက် မကြိုက်တာတွေ များတဲ့ အထဲ
အဝေး ကို ပြေးထွက် ကာမှ... ဘာ ကမှ ဆောင့် မဆွဲ ပဲ.. အနီးဆုံး ပြန်ပြန် ရောက်..
ကျမလေ .. တကယ် ပဲ ဂုဏ် တွေ မောက်လိုက်ချင်ပါရဲ့ ..
ဘယ်လို မှ မစွမ်းသာ .. တော့ တဲ့ .. အဲဒိ ကစားကွင်း အလယ်..
နှစ်နှစ်သက်သက် ကြီး အလဲထိုး ခံ လိုက်ရတာနဲ့ တင်..
ရှည် လျား လွန်းပါ့ပေ့ တော့.. နေရာတကာ.. အဲဒီ သတိရ ခြင်း တွေ....
သေချာ လိုက်.. မသေချာ လိုက်..
ကျမ ဘာသာ ကျမ ကယ်တင်မှ ရမယ် ..
ကျမ .. ကျရှုံး သွား လို့ မဖြစ်ဖူး...
ကာလ ရှည်စွာ... စေ့ ရုံ ထားခဲ့သော.. တံခါး.. များ.............
နာကျင် စွာ..... ပြီး တော့... ... ... ...
ကျ..မ... ပိတ် လိုက် ... ပါ.... ရ ... စေ... တော့.......
WHATEVER & ANYWAY
၀၉ ဇွန် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 6/09/2013 02:24:00 PM
မောင် .. ဖြည့်ရမဲ့ ကွက်လပ်ကလေး...
ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာ လူ အများကြီး ရှိနေပါသည်..
ကျမကတော့ အိတ်ပရက်ဆိုလေးရှေ့ချ ထီးတည်း အတွေးနဲ့
ယောင်ချာချာ ကျမဘေးမှာ ကွက်လပ်ကလေး..
ဘုရားပေါ်မှာ ဘုရားဖူး အများကြီးရှိနေပါသည်..
ကျမ လက်အုပ်ကလေးကတော့ ထီးတည်း ငေး လို့..
ယောင်ချာချာ ဆုတောင်းစာတွေ ထဲ မှာ ကွက်လပ်ကလေး..
ပန်းတစ်လှေကြီး ပွင့်တဲ့ ပန်းခြံ ထဲမှာ.. လူတွေ အများကြီး ရှိပါသည်..
ကျမ နှစ်သက်တဲ့ ပန်းကလေးကတော့ ထီးတည်း မွှေးလို့..
ယောင်ချာချာ ၀တ်မှုန် နုနု လေးပတ်လည် မှာ ကွက်လပ်ကလေး...
နေညိုချိန် အထူး ဘတ်စ်ကားပေါ် .. လူတွေ အများကြီး ရှိပါသည်...
မမီ မကန်း နဲ့ အပေါ်ကွင်းကလေး က လှောင်ပြုံးလေးနဲ့ ငုံ့ကြည့်..
ယောင်ချာချာ လူတွေ ကြပ်ကြပ် သိပ်သိပ် ကြားမှာ.. ကွက်လပ်ကလေး..
လကွေးကွေး ပတ်လည် မှာ.. ကြယ်စင် တွေ ပျော်ပါးလျှက်ရှိပါသည်..
ကျမ ရဲ့ ရာသီရုပ်ကလေး ကတော့ တိတ်တိတ် လေး မှေး လို့..
ဆန်းစ အလင်း နုနု ဖြူအု ခြုံလွှာ အောက်မှာ ကွက်လပ်ကလေး...
ကျမဘေးက ပြတင်း မှာ ခန်းဆီးတွေ မလှစ်ပဲနဲ့ ..ထားပါသည်..
အသော့ ကလေး ရစ်သိုင်းလာတဲ့ လေပြေ..မှာ .. ရုတ်တရက် မျက်လုံးဖွင့် .
ကျမ ဘယ်လက် ကလေး နဲ့ စမ်း သပ်မိတာ က ကွက် လပ်ကလေး..
အလွမ်းဟာ.. ညိုရှရှ .. သူ့ ကိုယ်သင်းရနံ့မှာ ရစ်တွယ်လို့ .ကျန်ပါသည်...
နူးညံ့ရစ်သမ် တွေ တိုးတိတ် လူးလွန့် ခဲ့ဖူး တာက.. အမှတ်တရ...
ဟိုတုန်းကတော့ တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ နေနေကျ...
အချစ်ကို.. တူးဖော်မိတော့မှ.. ရုန်းမရ ပြု မရ.. .. ဘာနဲ့မှ အစားထိုး လို့မရ..
မောင်... ဖြည့်မှ ပြည့်ဝ တော့မယ့်..ကျမဘေးက .. ကွက်လပ်ကလေး လှလှ ....။
၀၃ ဇွန် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 6/03/2013 12:43:00 PM
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်မြင်ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ကြည့်လို့မကောင်းဘူး
ပြုတ်ကျအောင် ဖြုတ်မချနိုင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ဂီတက ရင်နင့်မကျန်ခဲ့တာ ဆန်းသလား ………..
ကိုယ့်အတွက် တိတိပပညွှန်းထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကျကာမှ စကားလုံးတွေကလာကျွမ်းနေတာ မခက်ဘူးလား
ကတ် …. ကနဲ ဖြတ်ချလိုက်ရမယ့် ဒါရိုက်တာ .. ခင်ဗျား ဘယ်ရောက်နေပြန်တာလဲ …
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကောင်းကင်ဆန်ပြရတာ မောပန်းပြာနှမ်း လာတယ်
( မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေမှာက လူတွေအပြည့်နဲ့ )
မြေပေါ်မှာ လဲလျောင်းခွင့်ရနေရင် ဒိထက်ပို ပြုတ်ကျစရာ ဒါဏ်ရာရစရာ ဘယ်မှာရှိတော့မလဲ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ဒါဏ်ခတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲပင်ပမ်းတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလည်း သိတာပဲ ..
ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ မာရေကြောရေ ရှိတယ် ဆိုတာလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲသိတာ..
ကိုယ့်နားထင် ကိုယ်သေနတ်နဲ့ ထောက်ပြီးကာမှ ပစ်ရခက်နေတတ်တာကလည်း သဘာဝပဲမဟုတ်လား …
တကယ်ဆို အဲဒီလို ပြန်မြင်ကြည့်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ကိုယ့်ဇာတ်ရုပ်လည်း ကိုယ်သိနေလျက်နဲ့ အပိုတွေ ..
ခုကျမှတော့ ဆေးစပ်လည်းမှား အရောင်လည်း မမှန်တဲ့အကြောင်း ဘာကြောင့်ချူပ်ကြောင်းထပ်ပြောနေမလဲ
အဲဒီလို လွင့်မျောရမယ်မှန်းသိရင် အစတည်းက မိုးတိမ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲ ရွာချပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့လိုက်ပါတယ် ..
Note: ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့လေးမှာ သူတစ်ပါး ကဗျာဆိုလို့ ရာဘင်ဲဒာနတ်တဂိုး ကဗျာ ဘာသာပြန် ပို့စ် တစ်ခုထဲသာ တင်ဖူးပါတယ်.. . ၂၀၁၀ တုန်းက ရေးထားခဲ့တဲ့ မနော်ဟရီ ရဲ့ ကဗျာ .. အဲဒီတုန်းက အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့.. ဖတ်ဖြစ်ရုံလေး ဖတ်ခဲ့ ပေမဲ့.. သူ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ် မှာ ဒီနေ့ ပြန်တင်လာတာ တွေ့ပြီး ပြန်ဖတ်ရတော့ ရင် ကို စူးရှတဲ့ မြှား တစ်စင်း လာမှန်သလို ခံစား ရပြီး.. ကျမ ကိုယ် ကျမ အဲဒီ မှာ ပြန်မြင်နေခဲ့ရတယ် .. ကျမ က အဲ ဒီ ကဗျာထဲ ရောက်သွားပြီး.. ပြန်ထွက် ဖို့ မကြိုးစားချင်လောက်အောင် ငြိတွယ်မိတာမို့ .. ကျမ ရဲ့ သူများ ကဗျာ မတင်ဘူး ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာ ကို ကိုယ့်ဖာသာ ချိုးဖောက်လို့ .. သိမ်းထားချင်တဲ့ အကြောင်း ကဗျာဆရာမလေး မနော် ဆီ ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. ကဗျာ ပြန်လည် တင်ပြ ခွင့် တဲ့ မနော် ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာ ပါ....။
၂၁ မေ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 5/21/2013 11:16:00 AM
၁ ၆ ၆ ၈ ၇ ...အဲ သလောက် ထူ တဲ့ စာမျက်နှာ..
လှန်လှော ခဲ့ တဲ့.. ကာ လ က တကယ်ဆို... ကြာ ရော ကြာ လို့ လား..
အမှောင်ဆုံး ၇၈ နေ့
အမှောင်ဆုံး ၇၈ ည..
ဖြတ်ကျော်လာ ရပြီး တဲ့ နောက်....
နောက်ထပ် မှောင်စရာ ရှိတော့မယ် မတွေး ထားခဲ့... ပေမဲ့..
ကျမ ရဲ့ ကောင်းကင် က တိမ်တွေ မစဲ နိုင်ဘူး...
အုံ ရင်.. အုံ ရင်း. .. ပြို ပြို.. ဆင်းလာတာ တွေ..
ဒီကမ္ဘာမြေ ကျမ ..ဘယ်နား သွား နေရ တော့မလဲ....
အားရ ပါး ရ.. ရုန်းခဲ့ ရတာတောင်...
ကျမ ရဲ့ ကြယ်ကလေး...
ကျမ ရဲ့ ဆင်ဖြူကလေး...
ပြီး တော့.. ကျမ ရဲ့ ၀က်ဝံ ကလေး....
ထွေးပွေ့ထားဖို့ ကျမ.. အားအင် တွေ ကျန်ပါသေး ရဲ့ လား.. ဒီအမှောင်မှာ...
အမည်နာမ.. ပညတ် တစ်ခု..
ကြိုကြား ပွင့် တဲ့ စပယ် ရုံ..
မိုးလုံ လေလုံ .. အသိုက်အမြုံ ကလေး..
နှင်း ဝေ သော နံနက်ခင်းများ..
တိုး တိတ် ညင်သာ.. ရေတံခွန်...
အစိမ်းရောင် တောင်စောင်း နဲ့ ၀ါးတဲလေး ညိုညို....
ကြယ်ရောင် တောက် ပ.. မိုးလုံးပြည့် ည များ..
ကျမ .. ခင်တွယ် ဖူး သော.. အရာတွေ...
အာယာတ စစ်မြေပြင်မှာ.. အငွေ့ ပျံ တစ်စ စီ..ဖြစ်..
ခုတော့ အား လုံး ... အဝေးဆီမှာ.....
ဒဏ္ဍာရီ ဆန် စွာ.... ကန့်လန် ကာ တစ်ခု ကျ သွား ခဲ့...
ရေမကူးတတ်သူမို့ တဲ့.. ကောက်ရိုး တစ်မျှင် ဖြစ်ချင်သူ ရှိခဲ့ တယ်..
အမှောင်ဟာ.. ကျမ ကို ထပ် နှစ် .. အဲဒီ ကောက်ရိုး မျှင်ကြောင့် ပဲ.. နစ်တော့မယ်..
နေမင်း က ကျမ နဲ့ ဝေး ကွာ လွန်းလှတယ်..
မုန်းတယ်.. မုန်း တယ်.. တံခါး တွေ မရှိတော့ တာ ကျမ မုန်း လှပြီ...
နေမင်း က ရွှေ ရောင်.. နေကြာခင်းတွေ မှာ သာ လို့..
နေမင်း .က..... ခရမ်း.... ရောင် ၀ိုင်အို လက်ပန်းတွေ ကို ပဲ နှစ်သက်..
နေမင်း က... ခရမ်း.. ရောင်.လာဗန်ဒါတွေ အတွက် ပဲ တာဝန်ရှိ...
နေမင်း က..ခရမ်း.. ရောင် ခမောင်း ပန်းတွေ ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်...
ခရမ်း ဖတ်ဖို့ ဆိုတဲ့.. မနော်ဟရီရဲ့ ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီး.. ကျမ ငို တယ်..
သူ့သူငယ်ချင်းအကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကျမ မောင်လေး ရဲ့ ကဗျာ ကို ဖတ်ပြီး .. ကျမ ငိုတယ်..
လိင်.. အချစ် နဲ့ မေတ္တာ တရား.. ကြား.. နံရံ ဟာ.. ထူလိုက် ပါးလိုက်..
မောင်ချော နွယ်ရဲ့.. ညီမလေး.. မမမြင့် ကို နောက်တစ်ခါ ထပ် ဖတ်ပြီး.. ကျမ ငိုတယ်...
အမေ ပျောက်သွားတဲ့ ကလေး ၆ ယောက် ရဲ့ ပုံ ကလေး.. သူငယ်ချင်း က ပို့ပေးလာတော့ ကျမ ငိုတယ်..
ကျမရဲ့ လမ်းလျှောက်ဖော် ကောင်မလေး က..
ပြန်တိုင်း တက္ကစီ ခတောင်းတတ်တဲ့ သူ့ချစ်သူအကြောင်း မျက်ရည် ၀ဲဝဲ နဲ့ ပြောတော့ ကျမ ငိုတယ်..
ကျမ လျှောက် နေကျ လမ်း က.. ရာသီ မရွေး အော်တတ်တဲ့ ဥသြသံ ကြောင့် ကျမ ငိုတယ်..
ခလုပ်တိုက်လို့ ဗန်းမှောက်ကျသွားတဲ့.. ကလေးလေး ငို တော့ ကျမ လိုက် ငိုတယ်..
အင်တာနက် သတင်းတွေ ပေါ် ရောက် လာတဲ့ လူသတ်ပွဲ တွေ ကြားက
ကလေးတွေ အတွက် ကျမ ငိုတယ်..
သူ့ မိန်းကလေး နဲ့ ရှိနေမှတော့ .. ကျမ ဖုန်း ကို ဘယ် ကိုင် တော့မလဲတဲ့
အငယ်ဆုံး ကလေးလေး ဖက်ထား ရင်းပြော နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမကြောင့် ကျမ ငိုတယ်..
တင်း နေအောင် ချည် ထားတဲ့ ကြိုး သုံး ချောင်း..
ဘယ် ဓား က မိုက်လို့ ဖြတ်မှာ လဲ...
ကျမ သူငယ် ချင်း ရဲ့ အသံ တိုး တိတ် လွန်းနေတယ်...
ကျမ ဘေး နားမှာ.. ဘယ်သူ မှ မပြုံး ကြတော့ ဘူး...
ကျမ ဘေး ပတ်လည် မှာ.. အလင်း ရောင်တွေ ပါးလျား ကုန်တယ်...
ကျမ ရေချိုး ခန်းက ဘာလို့ ဒီလောက် ကျဉ်းတာလဲ...
အပေါ်မှာ.... သစ်သားတန်း ရှိနေတယ်...
ဟို မှာ.. ကြိုး တစ်ချောင်း.. လဲ ချိတ် ရက် ...
ကျမ မျက်ခွံ တွေ ဘာလို့ ဒီလောက် လေးလံ လာရသလဲ....
ကြယ်ကလေး ရေ... ဆင်ကလေးရေ.. ၀က်ဝံကလေးရေ..
ကျမ တံခါး ကို ခေါက်ပါ...
တိမ်တွေ က.. မဲ မှောင်လို့.. ပြို လာခဲ့ ပြန်ပြီ.....။
၁၆ မေ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 5/16/2013 05:54:00 PM
မင်း.. အချစ်ကြောင့် ..
ငါ... မရပ်တန့် ခဲ့သလိုမျိုး...
မင်း အမုန်းကြောင့် လည်း....
ငါ.. ရပ်တန့် လေမှာ.. မဟုတ်ပေဘူး...
ဘ၀.. ဖြစ်သွားတတ်တာ မှန်ပေမဲ့..
ဘ၀ ကတော့ .. သူ့ တစ်ခုလုံး .. နှလုံးသား မဟုတ်လေ ဘူး...
ငါ လွမ်းတယ်.. ငါ လွမ်းခဲ့တယ်...
အချစ်က ခွန်အား ဖြစ်သလို မျိုး ..
အလွမ်း ဟာ လဲ... ခွန်အားတစ်ခု ပါပဲ ...
ချစ်နေတုန်း မှာ.. ငါ.. မရပ်နား ခဲ့ သလို..
လွမ်းနေတုန်းမှာ လဲ.. ငါ ဆက်သွားခဲ့တယ်...
မင်း အမုန်း လောက်နဲ့ တော့...
ငါ့ လမ်းတွေ.. မကွေ့ကောက်စေရ..
ငါ့ ပန်းတွေ .. မညှိုးနွမ်းစေ ရ..
ငါ့ သီ ချင်းတွေ.. မတိုး တိတ်စေရ..
ငါ့ လေပြေ .. မဆိတ်ငြိမ် စေရ....
လောကဓံ တရားတွေ ထဲ.. ငါ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်..
မင်း.. အချစ် တွေ လား...
ငါ ထပ် တည့် လိုက်တယ်.. မင်း အမုန်း တွေလား..
တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် .. လွှတ်ချ လိုက်....
ငါ ရှင် သန်နေဆဲပါ.. မြက်ခင်း နုနု တွေဆီ မှာ...
ငါ.. ရှင် သန်နေဆဲ ပါ... ကောင်း ကင် ပြာပြာ ရဲ့အောက်မှာ...
ငါ... ရှင်သန် နေဆဲ ပါ... တိမ် စိုင် ဖြူဖြူ တွေ ရဲ့ ကြား မှာ ...
ငါ.. ရှင် နေဆဲ ပါ... နှင်း ဆီ ၀တ်မှုံ တွေ ရဲ့ အလယ် မှာ...
ငါ.. ရှင် သန်နေဆဲ ပါ... သဲ သောင် မွ မွ ပေါ် မှာ...
ငါ... ရှင် သန်နေ ဆဲ ပါ....
၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 4/27/2013 04:00:00 PM
လမ်းကွေ့ကွေ့ ကောက်ကောက်တွေ ဆုံးတော့
အဲဒိ လယ်ကန်သင်းတွေ လွန်တော့..
အဲဒိ တောင်ပြာပြာတွေ ကျော်တော့…
အ၀ါရောင် ခန်းဆီးရွရွ ရှိတဲ့ ..ကနုတ် ပန်းတွေ ကပ်ထားတဲ့.
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှင်းဆီ ပန်း တစ်အိုး နဲ့
အဲဒိ အခင်း ကတော့ ပန်းနုရောင် ဖြစ်ခဲ့တယ်…
အတူတူ နေထွက် ဖူးပြီ.
တစ်ယောက်လက် ပေါ် တစ်ယောက် ..မေးထောက်လို့ အိပ်ဖူး ပြီ..
နေမင်း ရဲ့ နေရောင်ခြည် ဘေးခြင်းယှဉ် ရှူသွင်း
လမင်း ရဲ့ လရောင်ခြည် ဘေးခြင်းယှဉ် ရှုသွင်း.
အဲဒီ ပင်လယ် ပဲကွဲ့ .. မမောတမ်း တူတူကူးခဲ့..
အဲဒီ တောင်တွေ ပဲ.. ဖေးမရင်း တူတူ ကျော်
အဲဒီကမ်းစပ် ပဲ.. လက်တွဲရင်း တူတူပျော်..
စိုးရိမ် ပူပန်မှု တွေ ဝေယူကြ
ဘ၀ ရှေ့ရေးက အေးအတူ ပူအမျှ
ကျမ ပါးပြင် သွားတင်ထားတဲ့ အခိုက်..
သူ့ရင်ခုံသံမှာ .. ကျမ အိပ်မွေ့ကျ သွားလိုက်ဆို..
ဘ၀ က လုံခြုံ.. နွေးထွေး.. လေနုအေးကလေး တေးချင်းချို..
စွယ်တော်ရွက် လို့ပဲဆို ဆို … ခေါ်ခေါ်..
ကျမတို့ က.. ဘ၀ရဲ့ လက်တွဲဖော်….။
၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၃
(To MM & MM )
Posted by မမသီရိ at 4/22/2013 10:11:00 AM
ဒီလိုနေ့မှာ မှ ..ဒီမြူတွေက ထူးထူးခြားခြား
ပိန်းနေအောင် တုတ်တုတ်ဖွေးတော့တယ်.. .. ..
အုန်း လက်အဖျား အနား ကလေးတွေ
ငွေ စင် ဥ တွဲ ရွဲ လက်လက် ဝေ..
အတွေး ဟာ.. အစုန် အဆန်..
ပုံမှန် မဟုတ်တော့ တဲ့ ရထား အိုအို တစ်စင်း...
လမင်း အကြောင်း တွေ ရင်း.. ည .. က .
မလင်း ချင်ပဲ လင်း လာတဲ့ .. မနက် အိုစာ မှာ..
အလွမ်း ဟာ အိပ်မှုံ စုံ မွှား နဲ့.. ၀ိုး တိုး ၀ါး တား...
လမ်း လျှောက် ဖိနပ်အောက်မှာ..
ရာနှုန်းပြည့် သန့်စင် လိုသော.. အာသီသ တွေ နိမ့် လိုက်... မြင့် လိုက်....
တို့တွေ ဆွေးနွေးကြမလား ..
ရူးသွပ်ခွင့် ဆိုတာမျိုး က .. အခြေအနေ ကလဲ ပေးအုံးမှ ကို..
ရူးသွပ်ချင်စရာလဲ ကောင်းအုံးမှ ကို..
ရူးသွပ်ခွင့် ပြုတဲ့အရာ .လဲ ရှိအုံးမှ ကို..
ရူးသွပ်ခွင့် ပြု သူ လဲ ရှိအုံးမှ ကို....
အတွယ် အတာတွေ မရှာ ချင်တော့ဘူး..
ကျမ ကို မ ရူးသွပ် ပါစေနဲ့တော့..
ကြိုး တန်းလန်း နဲ့ စွန်တွေ အကြောင်း..
ဘယ်တော့မှ မထုတ်ဝေ မဲ့ စာ စောင်လိုသာ
ချောင် တစ်ချောင် ထဲ ထား ထားလိုက်ပါ...
ဒီ စွန် မှာ.. ကြိုး နဲ့....
ဟို စွန် မှာ လဲ ကြိုး တပ် လိုက်ပြီ...
သူတို့ဖာသာ လွင့် နေအောင် ပျံ ပါစေ ပေါ့ ...
ဝေဟင် ကျယ် ကြီးထဲ .. ကြိုး တွေ ထပ် မရှုပ် အောင်..
စွန်ကလေး .. ရေ့ ...
မြူထူထူပိန်းပိန်း တွေ ထဲ... ကျမ လေ...
မှန်စာ ကို ပဲ သွေး ပြီးရင်း သွေးနေမိတော့ တယ်....။
၂၁ မတ်လ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 4/05/2013 05:02:00 PM
တစ်ရေး ကလေး ပါပဲ....လောလောဆယ်..
တစ်ရေး တစ်မောလောက် သေသေချာချာ အိပ်လိုက်ရရင်..
ကျောက်စရစ်အက်ကွဲ လမ်းကလေးပေါ် က
ဘ၀ အမောတွေ ပြေလေ မလား..
လှောင်အိမ်ကလေး တစ်ခု မရှိလို့တဲ့..
မနက်က သွေးတွေ နဲ့ ဘ၀ကူးသွား ရှာတဲ့ ယုန်နက်ကလေး
အတွေး က ထွက်ပြေးမလား..
ဧည့်သည် ကွ.. အိမ်ရှင်ကွ ..
ကြိုးဝိုင်းထဲ က မျက်နှာမှာ အိုးမဲ နဲ့ သွေးသံရဲရဲ
တစ်ပါး ပိုသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ လောကဓံ ထဲ
အလဲလဲ အကွဲကွဲ ..
Shelter ကျဉ်းကျဉ်းထဲ ရောက်သွားတဲ့
ဘ၀တွေ အကြောင်း ဟောင်းတော့ဟေ့လို့ မေ့သွား လေမလား..
လေးလံ လွန်းလှ တယ်..
ပုခုံး ဘယ်ညာ .. ရှေ့နောက် ၀ဲယာ ..
မနိုင်လုနီး ပါး ၀န်တွေ .. အကြောင်း
အံ ဆွဲ ဟောင်းကလေးမှာ.. သိမ်းထားလို့ ရမလား...
အသက်ရှုရတာ မ၀ တော့ ဘူး..
ဘယ်ရင် အုံ ထဲ စူး စူး အောင့်နေတယ်...
ကြိုးတန်းလန်း နဲ့ ငှက် ကလေး ကို မေ့လိုက်ချင်တာ က အဆိုး ဆုံး ...
အုန်းလက် ညိုညို တွေ အောက် တစ်ရေးလောက် အိပ်ချင်တယ်.... ။
၃၀ မတ် ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 3/30/2013 06:59:00 PM
နွေဦး .. ကြိုကြရအောင် လို့ဆို.
အ၀ါ အလယ်မှာ နူးညံ့ အနှစ်သွေးနဲ့
ဆောင်းနှောင်းတေးဆို ..ကံ့ကော်တွေ ကို တဲ့ ချန်မထားခဲ့ပါလို.......။
၂၆ ဖေဖ်ါဝါရီ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 2/26/2013 04:27:00 PM
စိတ်ကို ရှင်း ရှင်းထား..
နှုတ် ကို ရိုးရိုး သုံး ..
နှလုံး ကို ဖြူဖြူ ကျင့်..
ခန္တီ တဲ့ ..
လွတ်မြောက်ရာ လမ်း က ပန်းတော ထဲ မှာ ချာလည် ချာလည်
လွမ်းပါတယ် ဆိုပါမှ အဲဒီတိမ်ဝါ၀ါ တွေထဲ စုံးစုံး မြုပ်တော့တယ်...။
၁၅ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 2/15/2013 03:19:00 PM
အတ္တ၊ မာန၊ အချစ် နဲ့ လုံးဝန်းသောကမ္ဘာ
တစ်စုံတစ်ရာ ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်မိတဲ့အကြောင်း
တစ်စုံတစ်ခု တောင် သေသေချာချာရေရေရာရာ
တပ်အပ် သေချာ မပြောနိုင်ပဲနဲ့များ..
ဘာတွေ ကြောက်လို့ ကြောက်မှန်းမသိ တဲ့..
ချိုင့်ခွက် ထူပြော လမ်းကြော မာမာ ကို လျှောက်နေရ ခိုက်တွေ..
ဘေး မှာ ပန်းတွေ ပွင့်နေတာ သိရဲ့.. စပယ်တွေ မွှေးနေတာ သိရဲ့..
အတ္တကိုမဖယ်ခွာ နိုင်တဲ့ နေ့ ၁၂ နာရီ ည ၁၂ နာရီ
အလီ အလီ စိတ်မနေပါနဲ့တော့..
လာချင်ရင် အနီးလေး လို့ ပြောခဲ့ဖူးတာ ဘယ်သူလဲ ..
ဒီမှာ က ကျီးတွေ အိမ်ရှေ့ကလဲ သာတယ် အိမ်နောက်ကလဲ သာတယ်..
မေတ္တာ အကြောင်း ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ က ကြောင်သတဲ့လား
ငါ ကတော့ အရာရာ အချစ်နဲ့ ပဲ တည်ဆောက် ချင်တာပါ..
ဒီကမ္ဘာ ကို အချစ်နဲ့ပဲ လှပ စေချင်တာပါ..
သူ့ ကို ချစ်ပါ.. ကျမကို ချစ်ပါ.. နေမင်း ကြီး ကိုချစ်ပါ..
လမင်းလေး လဲ ချစ်ပါ.. လေပြေလေးလဲ ချစ်ပါ..
နှင်းဆီဖူးတွေလဲ ချစ်ပါ.. ကန္တာရ ဆူးပန်းတွေလဲ ချစ်ပါ..
မိဘမဲ့ ကလေးတွေ ချစ်ပါ.. ခွေးလေ ခွေးလွင့် ကလေး တွေ လဲ ချစ်ပါ..
နင့် အနီးဆုံး လူတွေချစ်ပါ.. အဝေး ကလူတွေ လဲ ချစ်ပေးပါ
ဒီကမ္ဘာမြေ အလိုအပ်ဆုံး အရာ က အချစ်တဲ့.. ယုံကြည်ပေးပါ..
ငါ့ရဲ့ အူကြောင်ကြောင် ၀ါကျတွေ မနှစ်သက်ချင်နေပါ
မကြိုက်ကြောင်းတကူး တက ပြောပြ ပါ..
တစုံတရာကို ချစ်ခင်နှစ်သက်သွားတဲ့အခါ.. နင့် မာနတွေ ခါ ချလိုက်ပါ..
တစ်စုံတယောက်ကိုမှ တစ်စုံတစ်ခုတောင် ပြောဖို့ မလိုတဲ့အကြောင်း
နင်သိလာမဲ့ တနေ့ဟာ.. နင့်နှလုံးသား နင်နားလည်လာတဲ့ အခါ ... ။
၂၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 1/22/2013 04:02:00 PM
ဝေးဝေးပြေး မြင့်မြင့်ပျံ ..
လေဟုန် ကို ဆန်ချင်ရင် ဆန်..
လေစုန် မှာ.. ဟန် ချင်ရင် ဟန်...
ပါး မို့ မို့ ကလေး ပိုင် သူရှိခဲ့ပြီ...
ပန်းဆီ ရောင် ညနေခင်းတွေ ..
အလှ ဆုံး လှ ပါစေ ညီမလေး ...
အရုဏ် တွေ က .. အစွမ်း ကုန် ဖူးအာ..
ညီမလေး ဘ၀ သာယာ ပါစေ...
ချစ်ခြင်းများနဲ့ သာ .. ဖွဲ့သီ နှောင်တုပ် ..
မလှုပ် နှိုင်လဲ ရှိပစေ ..
ပျော်ရွှင် ခြင်းတွေ ကို.. အပိုင်သိမ်းဆည်း..
ဘ၀ ခရီး ဟာ... လင်းလက်စွာ ဖြောင့်ဖြူး စေ..
အခွင့်အခါ သာ ပေးခဲ့ရင်တော့ ..
အဲဒီ ပါး ဖောင်းဖောင်းကလေး..
သနပ်ခါး သွေး လူးပေးခွင့်...ရ မိချင် ပါသေး...
ချစ်သော ညီမလေး... ..။
အတောင်အလက်စုံခဲ့ပြီသော.. ချစ်ညီမလေး သို့
၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၃
Posted by မမသီရိ at 1/02/2013 05:59:00 PM
Labels: ကဗျာ, ချစ်သူများအတွက် ချစ်တဲ့စာ
လပြည့်၊ ခရမ်း၊ အစိမ်းနု၊ တယ်လီဖုန်း၊ အဆိပ် .. အမုန...
PEN International, PEN Myanmar နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ...
ဖေဖေ ပြန်မလာ တဲ့ .. ည.များ နဲ့.. နံနက်ခင်းများ ထဲ ...